ပညာရေးဘတ်ဂျက် တိုးမြှင့်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သော ကျောင်းသား ၃ဝ ကျော် သင်တန်းမှ ရပ်စဲခံထားရ - Yangon Media Group
ပညာရေးဘတ်ဂျက် တိုးမြှင့်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သော ကျောင်းသား ၃ဝ ကျော် သင်တန်းမှ ရပ်စဲခံထားရ
မန္တလေး၊ ဇန်နဝါရီ ၂၇- ရတနာပုံ တက္ကသိုလ်တွင် ပညာရေးဘတ်ဂျက် တိုးမြှင့်ပေးရန် တောင်းဆိုသော ကျောင်း သားများအနက်မှ ၃ဝ ကျော်ကို ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ပညာသင်နှစ်သင်တန်း မှ ရပ်စဲခံထားရကြောင်း သိရသည်။
”မနေ့က ရတနာပုံတက္ကသိုလ် ရောက်နေတော့ ကျောင်းသား ၁၂ ဦး သင်တန်းမှ ရပ်စဲခံထားရတာ သိရတယ်။ သင်တန်းရပ်စဲတာက တက္ကသိုလ်စီမံ ခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ရဲ့ စီမံမှုပါ။ အခြား တက္ကသိုလ်တွေက ဘယ်လိုစီမံသလဲ ဆိုတာ မသိရသေးပါဘူး။ အခု စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်နေလို့ ကျွန်တော် တို့ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနကို စာ မရောက်လာသေးပါဘူး”ဟု အဆင့်မြင့် ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ် ဒေါက်တာအောင်အောင်မင်း က ပြောကြားသည်။
ရတနာပုံတက္ကသိုလ်တွင် ပညာ ရေးဘတ်ဂျက်တိုးမြှင့်ပေးရန် တောင်း ဆိုသော ကျောင်းသားများကို ဇန်န ဝါရီ ၂၂ ရက်မှစတင်၍ တောင်းဆို ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သော ကျောင်းသား ၇၂ ဦးရှိခဲ့ပြီး အဆိုပါကျောင်းသားများ ထဲမှ ရတနာပုံတက္ကသိုလ်မှ ၁၄ ဦး၊ မိတ္ထီလာနည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ တစ်ဦး၊ မိတ္ထီလာ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှ ခြောက်ဦး၊ ရမည်းသင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ်မှ ၁၁ ဦး စုစုပေါင်း ၃၂ ဦး သင်တန်းမှ ရပ်စဲခံထားရကြောင်း၊ သင်တန်းရပ်စဲခံထားရသော ကျောင်း သားများထံမှ သိရသည်။
ပညာရေးဘတ်ဂျက် တိုးမြှင့်ပေး ရန် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးရှိ တက္ကသိုလ် များမှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၇၂ ဦးက တောင်းဆိုလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက် ကောက်ခံရရှိသော စာရင်းများအရ အဆိုပါတောင်းဆိုမှု တွင် ပါဝင်ခဲ့သော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၃၂ ဦး သင်တန်းမှရပ်စဲ ခံထားရပြီး ကျန် ၄ဝ ၏အခြေအနေကို ဆက်လက်၍ ဆက်သွယ်စုံစမ်းလျက် ရှိသည်။
တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လမ်းညွှန်ပါ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ပြစ် မှု၊ ပြစ်ဒဏ်များအပိုင်း(ဃ)၊ အပိုဒ် (၁)၊ အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြားမှုဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများအမှတ်စဉ်(၆)၊ ကျောင်းစည်း ကမ်းဖောက်ဖျက်မှုဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများ အမှတ်စဉ် (၁) တို့ကို ဖောက်ဖျက်ကျူး လွန်သောကြောင့် သင်တန်းမှ ရပ်စဲ လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ တက္ကသိုလ် အသီးသီးမှလည်း သင်တန်းမှ ရပ်စဲ ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သော စာအရ သိရသည်။
မြတ်မော်တင်စွန်းစေတီတော်တွင် အသစ်တင်လှူမည့် စိန်ဖူးတော်၊ ငှက်မြတ်နားတော်၊ ရွှေထီးတော် ပုသ?
မြန်မာ-တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်း ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပွဲကျင်းပ
စပိန်ဦးစားပေးဂိုးသမားနေရာအတွက် အာမခံချက်မရှိဟု ဒီဂီယာသတိပေးခံရ
ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ၌ နေရာအားလုံးတွင် ဝင်မပြိုင်ဟု ပြည်ခိုင်ဖြိုး ဆုံးဖြတ်
ရခိုင်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် တိုက်ပွဲများ အမြန်ဆုံးရပ်ဆိုင်းပေးရန် ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင??
၁၉၈ဝ ပြည့်နှစ်ထုတ် Levi’s ဂျင်းထည်များ ဈေးကွက်တွင် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာဖွယ်ရှိ
သေချာပြင်ဆင်မှုများကြောင့် တန်းဆင်းဇုန်မှ လွတ်မြောက်ခဲ့ကြောင်း GFA အသင်းနည်းပြ ဆို
မောင်တောတွင် အကြမ်းဖက် သမားများ ထောင်ထားသည့် မိုင်းတစ်လုံး တွေ့ရှိ